၎င်းတို့အား Tech မှကျောင်း - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
သူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုအတွက်သူတို့ကိုကူညီရနျကြှနျုပျတို့၏ဖောက်သည်များအတွက်ထိရောက်သောလေ့ကျင့်ရေး Solutions ။
EC-Council မှ isaglobal leader in InfoSec Cyber Security certification programs like Certified Ethical Hacker and Computer Hacking Forensic Investigator. EC-Council မှ University offers accredited online cyber security degrees.
Open Source နည်းပညာယနေ့ကမ်ဘာပျေါတှငျအမြားဆုံးအသုံးများနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်နှင့် Redhat လုံခြုံ server ကိုအခြေပြု enviroments မှာလွှမ်းမိုးနေသည်။ Redhat တစ်ဦးချင်းတိုးတက်မှုအတွက်သင်တန်း, သင်တန်းနှင့်အောင်လက်မှတ်များအမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်း
Microsoft ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအပေါ်အလုပ်လုပ်ဖြစ်စေပေးပို့သို့မဟုတ်စီမံကိန်းကိုပေါင်းစည်းမှုများအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့၎င်းတို့အားမှာလေ့ကျင့်ရေး၏အကူအညီဖြင့်ငါတို့သည် Microsoft ကနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီး Microsoft Certified ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်လာရန်သင်ပိုမိုထိရောက်စေ
အကြောင်းကိုလေ့လာပါ AXELOS‘ Best Practice solutions, covering IT Service Management, Cyber Resilience, Project, Programme, Portfolio, Risk and Value Management. Learn about working at AXELOS Global Best Practice.
ကြီးစွာသောဂေဟစနစ် relay ကို